Banyere Anyị - SHANGHAI COREWIRE ụlọ ọrụ CO., LTD
SHANGHAI COREWIRE ụlọ ọrụ CO., LTD na ụghalaahịa Ndị Kọrịnt®, dị ka ọkachamara soplaya nke ígwè nhazi akụrụngwa na integrated ngwọta. Kemgbe mmalite ya na 2010,Ndị Kọrịnt® etinye aka na ịnye igwe dị elu & ihe ngwọta. Main ngwaahịa na-agụnye Slitting Line, Cut-to-Length Line, Press Machine, tube & Pipe Mill, ERW tube Mill, igwe anaghị agba nchara Pipe Mill, tube ọgwụgwụ gụchara ngwá, waya ịbịaru igwe, mpịakọta akpụ ngwa, electrodes akara, ulo oru akụkụ ahụ mapụtara & oriri.
Anyị mgbe niile gbakwasara site ahịa uru na ina, kwara-enye elu mma na kwesịrị ekwesị na ngwá na oru ngo na-enyere ndị ahịa jirichaa uru na ngwa ngwa dozie obodo mmepụta nsogbu. N'ime afọ iri nke mmepe, ndị ahịa anyị a ma ama n'Africa, Middle East, South Asia, na America mepụtara ka ha bụrụ ndị na-asọ mpi na mpaghara.
Ihe kachasị dị mkpa nke ndị Kọrịnt®na-arụ ọrụ n'oge ma dị irè. Dabere na ọkachamara engineer otu, na anyị ga-enye a ezi uche tupu ahịa alo, feasibility na-akọ, na ígwè nhọrọ, ọ bụla rere igwe na a pụrụ iche faịlụ niile ahịa na-enye ogologo oge ọrụ na akụkụ ahụ mapụtara.
Dabere na China, ebumnuche anyị bụ ịghọta ijikọ ụwa ọnụ nke ngwa ọrụ ụlọ ọrụ dị elu na ihe ngwọta!
Daalụ maka uche gị! Ndị Kọrịnt® na-atụ anya inweta uru ọ ga-erite na imekọ ihe ọnụ ogologo oge!
Anyị factory nwere a 6S management usoro na-ebelata na-arụ ọrụ okirikiri, belata mmepụta na-eri, melite mmepụta arụmọrụ, hụ ngwaahịa mma.
Iji jikwaa ihe eji emepụta ihe dị ka ndị mmadụ, igwe, akụrụngwa na usoro na saịtị mmepụta iji melite ogo ọrụ niile. Comprehensive nghọta nke ndị ahịa mkpa, na-enye ọkachamara oru nkọwa na-aza ajụjụ maka ahịa.
Highlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-eme nchọpụta, mmepe, na imepụta ígwè ọrụ igwe na Shanghai. Na ezi uche price, European ọkọlọtọ àgwà akara, 7 24 mgbe niile mgbe-sales ọrụ, akụkụ ahụ mapụtara ọkọnọ.
Igwe. Ihe Ngwọta Ya. Ihe
igwe & ihe ngwọta agwakọta
Ezigbo ego, Nbudata ọsọ ọsọ, Stgba ọsọ na-akwụ ụgwọ,
maka ngwọta kacha mma!